IIBHOKISI ZERINGI YOMTSHATO EZINGAMA-44, IZITYA KUNYE NABAPHETHEYO UKUZE UGCINE IMISESANE YAKHO IKHUSELEKILE - UTHETHATHETHWANO
Eyona Uthethathethwano Iibhokisi zeringi yomtshato ezingama-44, izitya kunye nabaphetheyo ukuze ugcine imisesane yakho ikhuselekile
Iibhokisi zeringi yomtshato ezingama-44, izitya kunye nabaphetheyo ukuze ugcine imisesane yakho ikhuselekile
Ngaba ujonga ibhokisi yemisesane efanelekileyo ukuze ugcine i-bauble yakho oyithandayo? Gcina umsesane wakho (okanye amakhonkco) ukhuselekile kwenye yezi ziphatho zomtshato. UMFANEKISO ONELOVE Ukuhlaziywa ngoMeyi 20, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Sithembe, ibhokisi yomsesane yinto enye yomtshato ongazange wazi ukuba uyayidinga. Ngoku ukuba uyabandakanyeka kwaye uza kutshata kungekudala (okanye sele utshatile), unezinto ezimbalwa ezitsha zokuhombisa ukuze ugcine umkhondo wazo- ukwenza ibhokisi yomsesane eyimfuneko ukulungiselela iinjongo zokugcina.
Ngobuninzi beebhokisi zeringi ongazikhetha phaya, yinciphise ukuya kwinto eyenzelwe ekhaya yonke into iye kwinto ye-luxe kwaye ilungele umsitho wakho. Ukusuka kwiibhokisi zeringi epholileyo eyona ndoda ingahamba nomgaqo ukuya kubanikazi bemisesane entle onokuyigcina kwisinxibo sakho, jonga eyona bhokisi ilungileyo, umqamelo, isitya, itreyi kunye nemibono yokubamba ubucwebe bakho bomtshato.
Izitya zeringi kunye neetreyi
Abaphethe Iiringi Zomtshato
Iibhokisi zeRandi ezikhethekileyo zoMsitho
1. Ngemini yakho yomtshato, faka imisesane yakho ngaphakathi kwebhokisi entle yomthi ekroliweyo ngomhla wakho womtshato kunye noonobumba bokuqala bamagama akho kunye neqabane lakho elizayo.
izimvo zesikhumbuzo seminyaka engama-50 sitshatile
UTHANDO olwenziwe ngezandla ibhokisi yebhokisi yomntu, i- $ 9, Amazon.com
2. Ibhokisi yomsesane weglasi ibonisa iimpahla ngaphakathi, kwaye ukumila kwesi siqwenga sejometri kunye nokugqibezela kwegolide kuyenza ukuba ijongeke njengale mihla.
Ivenkile yeKnot Ibhokisi yomtshato yeglasi yejometri, $ 30,
3. Umhla wakho womtshato awusoze ulibaleke, ke khumbula lo mhla ukhethekileyo ngebhokisi yomsesane ebandakanya umtsalane wekhalenda.
Indlu Yam Yamaphupha ibhokisi yomtshato, $ 25, Etsy.com
4. Awusoze uhambe gwenxa ngebhokisi yamakhonkco yeklasikhi. Le nto ithile, eza kwi-champagne velvet hue yothando, ifana ne-chic njengoko injalo ngokwesiko.
Usapho uJoolz ibhokisi enemisesane emibini, $ 40, Etsy.com
5. Enye yeebhokisi zethu zeerandi ze-velvet esizithandayo ngalo lonke ixesha iyafumaneka kwi-Nksk Bhokisi kwiindidi ezahlukeneyo zemibala kunye nobukhulu. Nokuba ukwisinxibo sakho okanye kufotwe ngesitayile sesuti yesimemo sakho, le nto ilungile ukongeza kwifoto.
Ibhokisi kaNkskz Ibhokisi yeringi yase-Eastleigh, i- $ 75, TheMrsBox.com
6. Hayi kwibhokisi yomsesane yoxande? Zama esi siqingatha segolide, isiqingatha sevelvet, ibhokisi yendandatho yesilinda. I-luxe kwaye iphantsi, kwaye yahlukile nje kancinci.
U-Esselle Ibhokisi yeringi yeLaurine, $ 65, EsselleSF.com
7. Ngee-nook zayo ezibini ezikroliweyo, le bhokisi inomtsalane kunye neyodwa yenza umsesane omkhulu womtshato womntu ophethe iringi okanye oyena mntu ubalaseleyo ukuba angayiphatha. Ngenxa yokuba unokukrola ii-inishiyali zakho, sicinga ukuba uya kuyigcina 'ngonaphakade kwaye njalo.'
Ivenkile yeKnot ibhokisi yomsesane webhokisi yomtshato eyenziwe ngokwezifiso, i- $ 26,
8. Iipropos zomtshato wangokuhlwa, le bhokisi yeringi yeringi eluhlaza okwesibhakabhaka emnyama ineyilo entle yokusika.
UyiloSter Ibhokisi yeringi ebomvu eluhlaza, $ 10, Amazon.com
9. Ayifumani rustic ngakumbi kunale bhokisi yentsimbi yomtshato eyahlukileyo, eyenziwe ngokusika okwenziwe ngomthi kwaye ikrolwe ngokukhetha kwakho amazwi amane amnandi. Ubuhle bayo bendalo bungena kanye emtshatweni ophefumlelweyo wehlathi.
Ivenkile yeKoyal Ibhokisi yomsesane yomtshato ebhaliweyo, $ 10, Amazon.com
1. Umqamelo womtshato odidi oluphezulu ufumana uhlaziyo oluncinci kwii-glam sequins-zilungele ukuthwala imisesane yakho yomtshato ezantsi epasejini ngexesha lomsitho womtshato we-luxe.
Umtshakazi kaDavid isangqa somthambo ophethe iringi umqamelo, $ 35, Ngobubele.com
2. Ukuba uyaluthanda uluvo lwendabuko lokuba nomqamelo womsesane kumsitho wakho, kodwa ufuna ukuba ujongeke kancinci, jonga lomqamelo welinen entle kunye nenkcazo 'yaphakade' ngohlobo lwesimbo seediliya.
Ivenkile yeKnot ilokhwe yelineni yendalo yomqamelo ngohlobo lweediliya, $ 45,
3. Nokuba ngumtshato waseJapan okanye ngumtshato wasentwasahlobo, lo mqengqeleki wentyatyambo yentyatyambo lukhetho oluhle. Ipokotho yayo encinci ithi 'uthando' ngesiNgesi nangesiJapan.
Okuninzi Intyatyambo yentsimbi yentyatyambo, $ 37, Beau-Coup.com
4. Asinako ukuthatha amehlo ethu e-champagne ethandekayo kule pilisi ilokhwe umhlophe.
Ivenkile ye-MC yokutshata umqamelo womtshato omhlophe umqamelo, $ 20, Etsy.com
5.Ukuthanda izinto ezinkulu zangaphandle? I-moss kunye ne-succulents kule ntsimbi yomqamelo we-rustic unikezela ngomqobo, ukuthintela kwendalo.
Nje zika-Ann I-rustic moss ring umqamelo, i- $ 14, Etsy.com
Isiqithi sekhitshi lezitena
6. Iiringi zomtshato zinokubanjwa ngothando ngalo msamelo womsesane, ophethe igama kuphela olifunayo: uthando.
IGartner Studios 'uthando' umqamelo welineni umqamelo, $ 15, Michaels.com
7. Umtshakazi othanda izincedisi ezinemibala uya kuyithanda le ntloko yomqamelo wepinki opinki, ehonjiswe ngentyatyambo enkulu ye-chiffon.
Uthando + Peony pink ring umqamelo ngeentyatyambo chiffon, $ 36, UthandoPeony.com
1. Esi sidlo sesangqa, sibhalwe umyalezo ofanelekileyo, siyinto yakudala ekufuneka ibe nayo ukufikelela kwitafile esecaleni kwebhedi okanye amampunge.
Kate Ok INew York 'Ngale Ndandatho' yokutya, $ 30, INkosiIngu
2. Kukuthini ukuvumisa ngeenkwenkwezi okutshatileyo kungafuneki ukugcina amakhonkco kwisitya esalatha imiqondiso? Esi siqwenga sivela kwi-Urban Outfitters lukhetho olukhulu-nokuba iMercury ikwindlela ebuyiselweyo.
Abaphuma ngaphandle ezidolophini I-zodiac trinket yokubamba-yonke isidlo, $ 18, YObuNga
3. Sithande kakhulu isitayile se-bohemian kunye ne-teal hue etyebileyo yesitya esenziwe ngesandla, esilungele ukubamba imisesane yomtshato.
Ukugqithisa kunye noMlilo Isitya esenziwe ngesandla esiluhlaza, $ 14, Amazon.com
4. Esi sidlo sesangqa silingana nesundu esinomphetho wobhedu sigqibelele esi sincinci sanamhlanje.
I-Anthropology I-Palmistry trinket kunye nesitya sendandatho, $ 16, Anthropologie.com
5. Asinakumelana neebhokhwe zothando ezimbini ezihleli ngasesiphelweni sesitya esincinci. Ngokuqinisekileyo esi sisiqwenga ungasidlulisela kwizizukulwana.
ILenox 'I-French Perle' emhlophe yothando yeentaka, $ 23, Amazon.com
6. Yenza ii-initials zakho ezisandul 'ukutshata okanye i-monogram yakho yomtshato ibhalwe kule tray yobucwebecwebe.
Ivenkile yeKnot itreyini yobucwebe yesikhumba se-vegan ene-monogram ebhalwe emboss, ukusuka kwi- $ 12,
7. Esi sidlo sesangqa sihle kakhulu, sinemibala, sithandana kwaye siyinto yanamhlanje ngaxeshanye. Kwaye, siphantsi ngokupheleleyo kuyo nayiphi na ibhokisi yebhokisi okanye isitya se-trinket onokuyenza ngokokuqala kwakho.
UEmily Jeffords I-monogram trinket kunye nesitya sokutya, $ 14, Anthropologie.com
8. Yenza ngokobuqu le thayile ye-acrylic iphrintiweyo enegama lakho okanye igama lokugqibela kunye kunye nokuyisebenzisa njengesiphatho sendandatho naphi na ukhetha ukuyibeka kwigumbi lokulala.
Ivenkile yeKnot ukuprinta kweentyatyambo itreyi ye-acrylic engunxantathu, $ 30,
1. Yenziwe ngethambo le-china kunye ne-24-karat yegolide, le bhokisi yemarmore yemarble ivakalelwa ngathi yindlalifa yosapho, iyenza indawo ekhethekileyo yokugcina amakhonkco omtshato.
Isiqulatho Ibhokisi yezacholo yemarble, $ 65, SaksFifthAvenue.com
2. Le bhokisi yezacholo yeplanga, yokuhlamba ukukhanya ilingene ngokwaneleyo ukuba ingabamba zonke ezona ziqwenga zakho zibalulekileyo.
Abaphuma ngaphandle ezidolophini ibhokisi eboshwe ngeplanga yebhokisi, $ 88, YObuNga
3. 'Ndiyakuthanda inyanga nasemva' yintetho ethandwayo yincwadi yabantwana enomtsalane Cinga ukuba Ndikuthanda kangakanani . Kwaye luphawu olumangalisayo lothando uyakonwabela ukukhunjuzwa ngalo lonke ixesha ujonga kule bhokisi yomsesane womtshato.
Ivenkile yeKnot Ibhokisi yesilivere eyenzelwe wena yesiqingatha sebhokisi, $ 26,
4. Amagumbi afuna indawo yokubeka iringi yawo yomtshato, iwotshi, amakhonkco eekhofu kunye nezinye izixhobo, akunjalo? Ngelixa umntu waso nasiphi na isini enokufuna ukusebenzisa le bhokisi yokutshixa-injalo nje jikelele- sicinga ukuba iyakusebenza ngokumangalisayo kumadoda amatsha afuna isiziba esihle, esihle sombhinqo wakhe omtsha.
Ingcongolo kunye neBarton Imigca yanamhlanje ibhokisi yebhola yobucwebe, $ 175, Cufflinks.com
5. Ibhokisi yobucwebe beetoni zesilivere yesimbo sokuvuna ijongeka ngathi yinto ayipasileyo umakhulu wakho, kodwa ngokwenene, yinto entsha efikelelekayo.
UAveson Ibhokisi yobucwebe bentsimbi yeediliya encinci yebhokisi yomququzeleli wokugcina into encinci, $ 11, Amazon.com
6. Ibhokisi yesacholo yesilivere efakwe velvet kunye negama lakho, ii-inishiyali okanye umhla womtshato (okanye zontathu!) Ayisiyontle nje kuphela, kodwa iluncedo kakhulu, ilungele ukugcina bonke ubucwebe bakho.
UMarko kunye noGraham Itreyi yokufikelela enemibala, $ 85, KwiMarkandGraham.com
7. Nokuba ungowaseIreland okanye awunguye, usenokubuxabisa ubuhle beli bhokisi yomsesane wenziwe ngomthi kunye necala lobucwebe. Iqhina leCeltic lifanekisela ukunxibelelana, okufanelekileyo kakhulu ngaphakathi nangakujikeleze umtshato.
IMarqART ibhokisi yobugcisa be-celtic, i- $ 59, Amazon.com
Utshatile nini uKate Middleton?
8. Uya eholideyini? Ngaphambi kokuba upakishe iibhegi zakho, cinga ukongeza le bhokisi encinci yobucwebe onokuyiphosa kwisutikheyisi yakho. (Ufuna ukuqinisekisa ukuba iindandatho zakho zikhuselekile kwaye zikhuselekile ngexesha lokuhamba, nazo!)
Indawo yokugcina izinto zobumba Icala leMcKenna lesikhumba esincinci sezinto zokuhamba, $ 40, PotteryBarn.com
1. Le mnini ilula womnwe womtshato unokwenziwa ngokwezifiso ubunobumba obunobumba obunobumba obuninzi.
Thembisa Pottery isibambo sokuqala, $ 30, Etsy.com
2. Guqula imisesane yakho ibe sisihombiso sothando ngokuyibeka phantsi kweglasi — xa uvala isiciko sale mali yomtshato, kunjalo. Nabani na ofumana Omhle kunye nesilwanyana vibes kule ring holder ngoku?
Indawo yokugcina izinto zobumba Ikhonkco lomtshato lomtshato, ukusuka kwi- $ 50, PotteryBarn.com
3. Isikhumbuzo semihla ngemihla somtshato wakho wasetropiki oya kuyo okanye i-honeymoon, lo mnini-ring uhlala ephethe iqhinga.
Emanzini umnini-khonkco osikiweyo, $ 30, Imvu.com
4. Le mpahla yentsimbi yomtshato ityatyekwe ngesilivere iye yanikwa 'yinto eluhlaza' egqibeleleyo-iribhoni yoqweqwe lwawo.
Intengiso yeHlabathi umnini we-cactus ring, $ 13, WorldMarket.com
5. Zithandeka kangakanani ezi zinto zibambe iindandatho zezilwanyana? Kukho indawo eyoneleyo kwaba bafana bancinci kwiibhola ezininzi, ngalo lonke ixesha ufumana umsesane omtsha omnandi (molo, izipho zokukhumbula isikhumbuzo!), Yongeza nje epakethini.
Isithunzi Umnini we-Anigram, i-22 yeedola kwisethi ye-3, Shopbop.com
6. Abathandi beendlovu, zifunele isitya segolide esimhlophe kunye nesangqa esimhlophe esinendlovu enqabileyo owakha wayibona (ewe, ungayibeka imisesane yakho esiqwini sayo).
Intengiso yeHlabathi Indlovu yegolide yendlovu yemarble, i-20, WorldMarket.com
1. Ngubani othi umntu ophethe iringi yomtshato kufuneka abe yibhokisi yomsesane okanye umqamelo? Nokuba yeyiphi iVIP ephethe iimpahla ezantsi epasejini inokuyigcina kwiwotshi epokothayo.
Ivenkile yeKnot Isangqa somtshato esenziwe ngumntu, $ 36,
2. Ungayamkela le rose? Iringi yomtshato ibekwe ngaphakathi-ipholile kangakanani loo nto?
Umtshakazi kaDavid , Ibhokisi yebhokisi yeringi, $ 30, Ngobubele.com
3. Iincwadi zeenqanawa ziyayithanda le bhokisi intle kwaye iyingqayizivele- yenye yezona bhokisi ziyiliweyo ziyile zililo. Incwadi yobucwebe iza neendawo zokubeka amakhonkco kunye nobunye ubucwebe, kunye namakhadi esitayile sethala leencwadi ekubhalelwa kuso izifungo.
Ivenkile yeKnot 'Isithembiso esenziweyo' ibhokisi yencwadi yobucwebe-ephefumlelweyo yeediliya, $ 37,
4. Thumela umphathi wakho womsesane kwimishini eyimfihlo: ukugcina amakhonkco omtshato ekhuselekile. Imnandi kangakanani le 'bhokisi yokhuseleko' yomenzeli wakho omncinci wokuhambisa imfihlo? Ngokukhuselekileyo sinokuthi uya kucinga ukuba le yeyona ngqungquthela yebhokisi epholileyo.
Inqaba yeNdonga yoyilo ibhokisi yezokhuseleko emhlophe, $ 25, Etsy.com
5. Inokuthandeka njani le ndlwane intle intaka intle ijongeka ngamakhonkco amabini omtshato ngaphakathi?
ULillian Rose moss intaka indlwana yokubamba indandatho, $ 9, Amazon.com
6. Imisesane inokubanjelwa kwi-chic, ngaphandle kwento engenanto okanye ingxowa yelaphu. Isiqwenga ngasinye sinokulungelelaniswa nebinzana, 'Ngale makhonkco,' kukhetho lwakho lwemibala emine eyahlukeneyo.
Phrinta ukuthanda uMthi I-boho yomtshato ephethe ingxowa, $ 7, Etsy.com
eyakhiwe kwiibhedi zebhedi
izipho zokuzalwa usisi-in-mthetho
zeziphi iintyatyambo ezikwixesha lazo
amakhonkco esithembiso kwintombi yakho
hamba ezantsi iingoma zelizwe
Umama unyana umdaniso wengoma yomtshato